सिरियामा मानवीय संकट::KhojOnline.com
हालै सिरियाको पूर्वी गौटा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी चार सयभन्दा बढी सिरियाली नागरिकको ज्यान गयो । ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश अबोध बालबालिका छन् यसको सामाजिक संजालहरुमा सर्बत्र निन्दा गरिरहेकाछन। बसर अल असद सिरियाली सत्तामा आएको सात वर्ष भयो ।सिरियामा मानवीय संकट दिनानुदिन बढ्दो छ । उनको आगमनसँगै सिरिया कहालिलाग्दो गृहयुद्धमा होमिएको छ । अहिलेसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सिरियाली नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २०११ बाट सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएयता युद्धविरामका लागि गरिएका ११ वटा प्रस्तावलाई रुसले अस्वीकार गरेको छ । अन्ततः गत शनिबार मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सिरियामा एकमहिने युद्धविराम प्रस्ताव पारित गरेको छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त जेइद राद अल हुसेनले सिरियाको विकसित संकटबारे मुख खोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जुन तरिकाले सिरियामा युद्ध र हिंसा भइरहेको छ, मानवीयताका लागि यो अत्यन्तै लज्जास्पद छ । यस संकटको समाधान हुन नसक्नुले विश्व कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलतालाई पुष्टि गरेको छ ।’विश्वको ठुला राष्ट्र भनाउंदाहरुका यो दारागिरी कहिलेसम्म हुने हो ? के यस तर्फ बिकसित राष्ट्र भनाउँदाहरुहरुको बेलैमा कदम चाल्नु पर्ने होइन र ? हामी जस्ता कम् बिकसित र साना राष्ट्रहरुले पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ / यी ठुला राष्ट्र बनाउन्दाहरुसंग जहिले पनि सहतर्क हुनै पर्दछ /यिनीहरु साना राष्ट्रहरुलाई उठाउनुको सत्ता यिनीहरुसंग भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा जहिले पनि र जहाँ पनि आँखा गाडिरहेका हुन्छन /त्यसैले साना राष्ट्रहरु नमिली सुखै छैन /